Mark X ဆိုသည်မှာ… | CarsDB
Mark X ဆိုသည်မှာ…
Mark2ရဲ့နောက်မျိုးဆက်သစ် ဖြစ်တဲ့ Toyota ၏ Mark X ကို ၂၀၀၄ မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Mark X မှာ အင်ဂျင်ပါဝါ နဲ့2Wheel-drive/4 Wheel-drive ဟူပြီးကွဲပြားသေးပါတယ်။ 2500 cc နဲ့ 3000cc ဟူပြီးနှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Classic နံပါတ်အနေနဲ့ ကတော့
· GRX120-2500cc, 2WD
· GRX125-2500cc, 4WD
· GRX121-3000cc, 2WD
Grade အနေနဲ့ Mark X အားလုံးသည် G-Grade တွေဖြစ်ပါတယ်။G-Grade ကိုမှရိုးရိုး G-Grade နဲ့ အခြား Package များလည်းရှိပါတယ်။ GRAX120-2500cc,2WD မှာဆိုရင်...
250G F Package (အနိမ့်ဆုံးဂရိတ်)၊
250 G L Package (အင်တင်နာ၊ CD Charger ၊ ခြေနင်းမီးတန်း တို့ပါ။)
ဝယ်/ရောင်း တွေကျတော့အဓိကအားဖြင့် Push Start ဖြစ်လား၊ Original TV ဖြစ်လားကိုပဲအဓိကထားကျတယ်။ဂရိတ်အပြည့်ဆုံးကတော့ Premium ဖြစ်ပြီး GRX121-3000cc,2WD မှာသာ ထုတ်ပါတယ်။၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ မှာတော့ Mark X ကို မျိုးဆက်သစ်အဖြစ် ပုံစံပြောင်းလဲပြီး Class no. များကိုလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ GRX130 မှာတင်အခွဲပေါင်း ငါးမျိုးရှိပါတယ်။ 250G F Package, 250G Relax Section, 250G S Package, 250S S Relax Package Selection စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ 2004 Model လောက်ဆို စလစ်ဈေးပေါ်မူတည်ပြီး သိန်း ၂၅၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီး၊ 2009 ရုပ်ပြောင်းဆိုရင်တော့ သိန်း ၄၅၀ ဝန်းကျင် ရှိနိုင်ပြီး၊ဒီရောက်ပြီးသား အက္ခရာနိမ့်သွားရင်တော့ ဈေးအများကြီးသက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။
Photo Detail: mmqmmq
Mark2ရဲ့နောကျမြိုးဆကျသဈ ဖွဈတဲ့ Toyota ၏ Mark X ကို ၂ဝဝ၄ မှာစတငျထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ Mark X မှာ အငျဂငျြပါဝါ နဲ့2Wheel-drive/4 Wheel-drive ဟူပွီးကှဲပွားသေးပါတယျ။ 2500 cc နဲ့ 3000cc ဟူပွီးနှဈမြိုးထုတျလုပျပါတယျ။
Classic နံပါတျအနနေဲ့ ကတော့
Grade အနနေဲ့ Mark X အားလုံးသညျ G-Grade တှဖွေဈပါတယျ။G-Grade ကိုမှရိုးရိုး G-Grade နဲ့ အခွား Package မြားလညျးရှိပါတယျ။ GRAX120-2500cc,2WD မှာဆိုရငျ...
250G F Package (အနိမျ့ဆုံးဂရိတျ)၊
250 G L Package (အငျတငျနာ၊ CD Charger ၊ ခွနေငျးမီးတနျး တို့ပါ။)
ဝယျ/ရောငျး တှကေတြော့အဓိကအားဖွငျ့ Push Start ဖွဈလား၊ Original TV ဖွဈလားကိုပဲအဓိကထားကတြယျ။ဂရိတျအပွညျ့ဆုံးကတော့ Premium ဖွဈပွီး GRX121-3000cc,2WD မှာသာ ထုတျပါတယျ။၂ဝဝ၉ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ မှာတော့ Mark X ကို မြိုးဆကျသဈအဖွဈ ပုံစံပွောငျးလဲပွီး Class no. မြားကိုလညျးပွောငျးလဲခဲ့ပါတယျ။ GRX130 မှာတငျအခှဲပေါငျး ငါးမြိုးရှိပါတယျ။ 250G F Package, 250G Relax Section, 250G S Package, 250S S Relax Package Selection စသညျဖွငျ့အမြိုးမြိုး ထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ ယခုအခြိနျမှာ 2004 Model လောကျဆို စလဈစြေးပျေါမူတညျပွီး သိနျး ၂၅ဝ ဝနျးကငျြလောကျရှိပွီး၊ 2009 ရုပျပွောငျးဆိုရငျတော့ သိနျး ၄၅ဝ ဝနျးကငျြ ရှိနိုငျပွီး၊ဒီရောကျပွီးသား အက်ခရာနိမျ့သှားရငျတော့ စြေးအမြားကွီးသကျသာသှားနိုငျပါတယျ။
Posted at: 10-01-2014 04:32 AM